म बाँच्न चाहान्छु सम्भव हुनेले सहयोग र सहयोगी मनसम्म पुर्याउन सेयरको अपिल गर्दछु (भिडियो हेर्नुहोस ) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारम बाँच्न चाहान्छु सम्भव हुनेले सहयोग र सहयोगी मनसम्म पुर्याउन सेयरको अपिल गर्दछु (भिडियो हेर्नुहोस )
म बाँच्न चाहान्छु सम्भव हुनेले सहयोग र सहयोगी मनसम्म पुर्याउन सेयरको अपिल गर्दछु (भिडियो हेर्नुहोस )
November 26, 2020 admin समाचार 1361
काठमाडौ । गरीबीले थिचेपछि दार्चुला जिल्ला सुनसरा वडा नं. ४ का फोरसिंह बिष्ट आजभन्दा एक बर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलमा मलेसिया उडे । सन् २०१९ नोभेम्बर १३ तारिखमा मलेसिया उडेका उनी सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि गएका थिए । त्यसका लागि सबै गर्दा ४ लाख रुपैयाँ बढी नै ऋण लागेको थियो ।
पहिलेपनि बालबच्चा पाल्नका लागि ऋण बढ्दै गएपछि उनी विदेश जानु परेको थियो । तर जहाँ कमजोर त्यही पहिरो भने झै उनैमाथी आपत आइलाग्यो । मलेसिया पुगेको एक महिना नवित्दै खुट्टाको न’शा च्या’पियो । न’शा च्या’पिएका कारण खुट्टाको सबै भागमा रक्त सञ्चार हुन नसक्दा खुट्टाको तलको भागबाट बि’ग्रिदै गयो ।
उनी अस्पताल भर्ना भए । अस्पतालले बि’ग्रिएको भाग नि’काल्नै पर्छ भन्दै २ वटा औला निकालिदियो । त्यही बेला कम्पनीले जागिर गएको सूचना दियो । यता म्यानपावरमा सम्पर्क गर्दा म्यानपावर टाट पल्टिएर बन्द भएको सूचना पाए । अब उल्ट्रै अस्पतालको उपचार खर्च समेत उनैले तिर्नुपर्ने भयो । कामदारले औषधि उपचार खर्च तिर्नुपर्ने देखेपछि अस्पतालले पूरा उपचार नगरी लागेको खर्च असुलेर नेपाल जान भन्यो ।
कमाउँन गएका उनी अपाङ्ग भएर नेपाल उत्रिए । उपचारका लागि अनेकौँ अस्पताल धाए । केही अस्पतालले क्यान्सर हो भनिदिए । तर अन्तिम पटक भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुग्दा क्यान्सर हैन । न’शा च्या’पिएको हुनसक्छ भनियो । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सबै परीक्षण गर्दा एकिन भयो की खुट्टा बि’ग्रिदै जानुको कारण नाशा च्यापिएकै कारण हो । यसैले अब धेरै ढिला भइसकेको छ ।
बाग्रिएका अरु केही औला निकाल्नु पर्छ । कम्मर भन्दा तलसम्म अर्को खुट्टाको एउटा न’शा ल्या’एर राख्नुपर्छ अप्रेशन निक्कै जटिल छ । अप्रेशन चाँडै नगरे फैलिदै गएर जीवन जानपनि सक्छ । १० लाख धरौटी राख्नुस् भनेर शिक्षण अस्पतालले भनिदिए । तर उनीसँग त उनको दुर्गमको घरमा एक छाक खाने खाना समेत छैन ।
काठमाडौमा अर्कैका साहारामा बसेका छन् । लागेको ऋणको पहाडले अत्यास बनाएको छ । अब कसरी पार पाउने उनी एकदमै निराश छन् । नेपाली दाजुभाईको सानो सहयोगले आफु बाँच्ने र खुट्टा जोगिएपछि आफ्ना चार जना बालबच्च बचाउने आशा उनले राखेका छन् ।
यसैले उनले सहयोगको अपिल गरेका छन् । यो सबै कहानी भिडियोमा देख्नसक्नुहुनेछ । त्यहाँ उनको आफ्नै खाता नम्बर र सम्पर्क नम्बर राखिएको छ । प्राविधिक रुपले सम्भव हुनेले सहयोग गरिदिनुहोला । टाढा हुनुहुन्छ । नेपाल पैसा पठाउँन गाह्रो छ । भने सेयर गरेर सम्भव हुने सहयोगी मनसम्म पुर्यादिनुहोला ।
उहाँको सम्पर्क नम्बर र खाता .नम्बर तल राखिएको छ ।
Name :- phour Sing Bisth
Bank Name :- sunrise bank limited nepal
Account No :- 0660642285205001
Branch :- Darchula
Contact No :- 9845369541
केकी अधिकारी अभिनित, गायक प्रमोद खरेलको ‘यो माया के हो’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित )
December 4, 2020 admin समाचार 3218
काठमाण्डौं । लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको सुमधुर स्वरमा रहेको ‘ यो माया के हो’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। मनछुने गीतमा शब्द राम कृष्ण महराको रहेको छ भने मन कुमार ( शिवराज)ले यस गीतलाई
कृष्ण कंडेलसँग दोहोरी चलेपछि आइन् ७ वर्षिय रबिना र आयुसा,भयो यस्तो रमाइलो (भिडियो सहित)
November 7, 2020 admin समाचार 7113
सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन मनमा बस्न सफल इन्द्रेणी कार्यक्रममा सबैको धन्यावा:दको पात्र भएको छ । यस कार्यक्र:मका संचालक कृष्ण कंडेल तथा इन्द्रेणी परिवार सम्पुर्ण रात दिन दु: खी बिरामी:को सेवामा समर्पित रहेको छ । यसको फल
November 29, 2020 admin समाचार 3590
काठमाडौं । नेपालका कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्नु कुनै नौलो होइन । तर चीनमा एउटा कम्पनीले कार्यालय आउन ढिलो गर्ने कर्मचारीलाई दिने सजाय तपाइ सुन्नु भयो भने अच्म्मित पर्नुहुन्छ । चीनको एक कम्पनीले कार्यालय ढिलो आउने कर्मचारीका
LEX 18 agenda conversation: Job club (444767)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418349)
Hello world! (345728)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318544)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (115236)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (105640)
दैविक शक्ति अकला देवी मन्दिर जहाँ आफै शंखघण्ट बज्छ (85160)